Alefaso ny fiasa "tsindrio iray-iray" amin'ny Gnome touchpad | Avy amin'ny Linux
Raul P | | Tutorials / Manuals / Tips
Indraindray mpampiasa GNOME maro no mahita ny tenantsika ao anatin'ny toe-javatra mahatsiravina tsy ahafahantsika manamboatra ny touchpad avy amin'ny ivon-toerana fanamboarana nomen'ity tontolo birao ity.
Hamahana ity olana ity:
Andao hiditra amin'ny terminal.
"Tsy mila miditra amin'ny maha-faka", apetrakay ao amin'ny terminal ireto baiko manaraka ireto:
1 Fomba hafa:
Amin'izao fotoana iainantsika izao dia tsy tokony hisy ny olana toa ireny, ny tontolo iainana dia tokony tokony hanome interface ho an'ny mpampiasa sary mba hikirakira ny fitaovan'ny PC. Misy olona toa ny ray aman-dreniko, izay tsy mahalala ny fomba ahafahana mampandeha ireo fiasa ireo, ary amin'ny farany dia mampiasa ny rafitry ny mpifaninana izy ireo.
Veloma aho, manantena aho fa hahasoa azy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Alefaso ny fiasan'ny tsindry iray-mikasika eo amin'ny touchpad Gnome
Rehefa nanana izany olana izany aho dia nampiasa ilay torolàlana
winston Montagne dia hoy izy:
Gazety tena tsara
Mamaly an'i winston Montagne
Azoko amin'ny safidy gnome fikirakirana izany.
Ao amin'ny 2 amin'ireo solosaina finday 3 misy ahy dia manana io olana io ihany aho.
Ao amin'ny fitaovana tweak gnome tsy miseho ny safidy? Ny tiako holazaina dia hoe tsy dia hitako loatra fa tiako ho fantatra raha azo atao avy any (heveriko fa) ary nisy ihany koa ny safidy avy amin'ilay nautilus izay mamela anao hisokatra amin'ny tsindry iray, hojereko izy ary aorian'izay dia hovaliako raha toa izany na niaraka tamin'ny fitaovana fanovana.
LOL miala tsiny, diso ny famakiako. Mety ho olana amin'ny mpamily ve izany?
IANAO? kinovan'ny gnome ?. Angamba olan'ny kinova manokana io.
Leopoldo.mjr dia hoy izy:
Marina ny anao, ny fianakaviana "linux" dia tokony, na inona na inona distro ananantsika, dia manana safidy sary ho an'ny olona tsy mahay mitantana ny terminal. Fotoana vitsy lasa izay dia namaky tao amin'ny bilaogy iray aho fa "linux dia rafitra iray ianarana" tokony hataontsika izay rehetra azo atao mba hahafahan'ny tsirairay mampiasa azy, raha tsy miampita izy ireo dia mankany amin'ilay rafitra hafa izay tsy tiako anarana na tadidio.
Mamaly an'i Leopoldo.mjr
artus dia hoy izy:
Raha tsy miseho amin'ny sary asehonao ny safidy dia vokatry ny olana amin'ny mpamily izany. Tsy olana Gnome Shell io.
Mamaly an'i artus
Izay no noeritreretiko.
Miala tsiny fa TSY Nitranga tamiko mihitsy izany, angamba satria mampiasa Fedora aho dia manome Gnome madio 100%
Resy lahatra aho fa na amin'ny Ubuntu Gnome na any Debian dia tsy misy izany.
Ity dia hadisoana manokana, an'ny kinova sy / na fizarana sasany, satria azoko atao ny manamarina fa ao amin'ny Funtoo dia tsy mitranga izany.
Mbola manana an'io fiasa io ao amin'ny GNOME (3.16) aho, mampiasa Debian Testing » http://i.imgur.com/MpbmjVu.png
Taylor dia hoy izy:
Mampiasa Arch aho ary ao amin'ireo safidiko fikiriko dia tsy nisy na aiza na aiza io safidy io ...
Misaotra fa nanompo ahy tamim-pahagagana .. !!!
Valiny tamin'i Taylor
Io no fanamarihana voalohany nataoko teo amin'ny tontolon'ny linux, nanapa-kevitra ny hametraka ubuntu 16.04 aho taorian'ny nandao tanteraka ny windows 8. Misaotra betsaka Raul P tamin'ny fandraisanao anjara, afaka namela ny kitikitin'ny touchpad-nao aho niaraka tamin'ny safidy faharoa nametrahanao synclient Tap Button1 = 1. Izany dia mitazona ahy amin'ny linux. Misaotra anao
JONATANA dia hoy izy:
Misaotra betsaka, nanompo ahy ny baiko faharoa.
Mamaly an'i jonatha
Tena endrigovatody, ajudou be aho
Valiny tamin'i André
And dia hoy izy:
Sokafy ny terminal (na ny menio) ary soraty: dconf-editor (dconf editor amin'ny Espaniôla). Rehefa misokatra izy dia mankanesa any:> org> gnome> desktop> touchpad> [tap-to-click (true) hampandeha ny boaty na boaty eo ankavanan'ny menio teo aloha]. Vonona, afaka mampiasa ny tsindry amin'ny touchpad isika. Nanoratra an'ity fomba ity aho mba hahafahan'ny mpampiasa, na inona na inona vao manomboka, hahatakatra izany. Miarahaba an'ireo mpampiasa rindrambaiko maimaimpoana rehetra. Aza adino ny manome ho an'ny tetikasa rehetra (misy vola mety> 5,;).
Rehefa avy nitolona sy namaky iray andro aho dia hitako irery, fa rehefa mamoaka aho dia mahita fa misy bilaogy maromaro izay tsy nanome ny valiny ankehitriny dia efa manana izany, na valiny mitovy amin'izany. Wow !!!… Angamba havoakako amin'ny vidiny.
Valiny amin'ny Art-e
teknolojia kiketechnology dia hoy izy:
Misaotra indrindra anao. Tena nilaina be io tamiko!
Mamaly amin'ny teknolojia kiketechnology